क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले कहाँ गरे कमजोरी ?
कुनैपनि कुराको जन्म, विकास र विनाशमा आन्तरिक कारण नै मुख्य हुन्छन् । जहाँ बाह्य कारण महत्वपूर्ण त हुन्छन् तर, निर्णायक हुनसक्दैन । यो नै माक्र्सवादी मान्यता हो । क्रान्तिकारीहरुको सन्दर्भमा पनि आन्तरिक विचार, राजनीतिक संगठन, संघर्ष र संस्कृति नै क्रान्ती वा प्रतिक्रान्तिका लागि निर्णायक कारण हुन्छन् । बाह्य कारणहरु महत्वपूर्ण भएपनि ती सहायक नै रहन्छन् ।
जुन नेताको नेतृत्वमा क्रान्तिको निर्णय, सुरुवात र विकास हुन्छ, उही नेताकै नेतृत्वमा प्रतिक्रान्तिको बीजारोपण भई क्रान्तिको विनाश हुन्छ भन्ने थाहा नभएको होइन् । यो थाहा नहुनु र यस्तो आशंकासमेत नगर्नु क्रान्तिकारीकै कमजोरी हो । त्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि लागु हुन पुुगेको छ । नेतृत्वको गलत कदमको विरोध गर्नुको साटो उल्टै त्यस्तो नेतृत्वलाई अन्धसमर्थन र पूर्णंसाथ दिनु पनि त्यस्तो समस्याको विजारोपण हुनु हो । नेतृत्वको पक्षपोषण र केन्द्रीकरणमा प्रतिस्पर्धा नै नगरी प्राधिकार बनाउन र देवत्वकरण गर्न अहम् भूमिका निभाउनु नै मुख्य समस्या हो । विभिन्न तर्क वितर्क र कुतर्क गरेर क्रान्तिकारी नेतृत्व तर्फबाटै त्यस्ता गल्ती र कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयाससमेत हुनु झन् ठूलो कमजोरी हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि यस्ता घटना प्रशस्तै हुनपुुगे । पार्टी र नेतृत्वमा विघटन र विसर्जनका संकेतहरु जब बारम्बार देखिन थाले तब ती विषयमा सूचना र सन्देशका अतिरिक्त सुझाब र दबाब हुनुपथ्र्यो । तर, त्यो स्तरमा सुुझाब र दबाब कहिल्यै भएन । असहमती र विरोध पनि धेरै-थोरै प्रकट गरिए पनि तिनको खासै प्रभाव र दबाब परेन । दबाब र प्रभाव पर्ने र पार्ने हदसम्म क्रान्तिकारी भनिनेले पनि केही गर्न सकेको देखिएन ।
यहाँ उल्टै ती गलत नीति र कृतिहरुको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न थालियो । नेतृत्वका क्रान्तिविरोधी हर्कतहरुको पूर्णँरुपले पक्षपोषण र महिमामण्डन गरेर तिनै गलत, विकृत संस्कार र आदर्शको व्यापक विस्तार गरि कार्यान्वयन गर्न खोजीयो । यस्तो अति नै हुँदै गएपछि मात्र क्रान्तिकारी पंक्तीले सामूहिक र संगठित विरोध गरेका हुन् । तर, नेतृत्वलाई सुनाउने र मनाउने हदसम्म भने त्यो संघर्ष चर्काउन सकिएको देखिएन । यसो गर्न नसक्नुमा पनि क्रान्तिकारीहरुको उदारवादी प्रकारको कमजोरी नै हो ।
माओवादी आन्दोलनको विभाजन
माओवादी पार्टीमा आएको विभाजनको कारण पनि आन्तरिक नै थियो । नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्दै कार्यकर्ताहरु नेतृत्वको महिमामण्डनमा लागेपछि समस्या उब्जिएको हो । जब तत्कालिन माओवादीकोे तलदेखि माथिसम्मकै बहुमत पंक्ती आफंैले घोषणा गरेको प्रतिक्रान्तिकारी र गद्दारहरु भनिनेसँग मिसिन पुुगे तब नै अस्वाभाविक खालका गठबन्धनहरु बन्न पुुगेको थियो । तत्पश्चात नै प्रतिक्रान्तिकारी मूल नेतृत्व र दलाल बनिसकेको अवसरवादी सहायक नेतृत्वबीच गठबन्धन भएको थियो । र, क्रान्तिकारीहरु एक्लिने र अल्पमतमा पर्ने गरी उक्त कदम प्रत्युत्पादक बन्न पुुगेको थियो ।
उक्त गठबन्धन हुनु राजनैतिक रुपले स्वाभाविक नै भएपनि यसबाट प्रतिक्रान्तिकारीहरु झन् सबल र सुदृढ भए भने क्रान्तिकारीहरु कमजोर र विशृङ्खलित । यसरी आफैँलाई कमजोर र विशृङ्खलित पार्ने र दलालहरुलाई पार्टी र सत्तामा हालीमुहाली गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउने गम्भीर गल्ती गर्नपुग्नु क्रान्तिकारीहरुको स्वयंमा आत्मघाती कार्य नै हो । फलस्वरुप केन्द्रीय समितिभन्दा तल रहेका थुप्रै क्रान्तिकारीहरुसम्म अन्तर्संघर्ष नचल्दै र उनीहरुलाई स्पष्ट पारेर समेट्ने वातावरण नबन्दै हतारमा विद्रोहको नाममा पार्टीमा विभाजन भयो । त्यो विभाजन हतारमा हठात् र बलात् भएको थियो ।
आवेग र प्रतिशोधकै फलस्वरूप भएको थियो भन्ने कुरा विभाजनको चार बर्ष बित्दा नबित्दै क्रान्तिकारी पंक्तिमै फेरि अर्को विभाजन आएको छ । विचित्र बिडम्बना त अझ के भयो भने संस्थापन क्रान्तिकारी भनिएको पंक्तिमै अर्को बर्ष बित्दा नबित्दै पुनः अर्को विभाजन भयो । र, संस्थापनको तलदेखि माथिसम्मकै बहुमत पंक्ती आफँैले घोषणा गरेको प्रतिक्रान्तिकारी र लाल गद्दारहरुसँग मिसिन पुग्यो ।
यी सम्पूर्ण विभाजनहरु र समग्र विचलनका पछाडी मूल क्रान्तिकारी नेतृत्वले क्रान्तिकारीहरुको सही मूल्यांकन गर्न नसक्नु र षड्यन्त्रकारी अवसरवादीहरुलाई महत्व दिनुको परिणाम थियो । जुन कमजोरीहरु संसार हल्लाउने स्तरमा पुगेको माओवादी पार्टी र दसबर्षे जनयुद्धसहितको क्रान्तिको आज यो स्तरमा विचलन, विभाजन, विघटन र विसर्जन हुनको लागि कम जिम्मेवार छन् भन्यो भने सैद्धान्तिक र दार्शनिक रुपले समेत अर्को गल्ती हुन पुग्छ ।
काखमा सुताइएका समकालीन सर्वोच्च नेतृत्व र उत्तराधिकारी बनाइएका नेताहरुबाट नै आफूँ, क्रान्ति र क्रान्तिकारी नेतृत्वप्रति अन्तरघात र विश्वासघात गरी प्रहार गरिएको घातबाट नै नेपाली माओवादी पार्टी र आन्दोलन क्षतविक्षत बनेको हो । त्यसैले अवसरवादी, दलाल र गद्दारहरुको कम बदमासी र बेइमानी हो भन्न खोजियो भने पूरै गल्ती हुन्छ । त्यसैगरी यहीँनेर साम्राज्यवादी, विस्तारवादीलगायतका देशीविदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिकेन्द्रहरु र तिनका जालझेल, चलखेल र षड्यन्त्र पनि कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कारणहरु रहेका छन् ।
राजनीतिमा जब नेतृत्व पंक्तिबाटै विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको अवलम्बनमा अनदेखा, अवमूल्यन र अवहेलना हुनथाल्छ तब विधि, पद्धति र प्रक्रियाको उल्लंघन हुन थाल्छ । सँगै स्वार्थ, सुविधा र अवसरले निर्णायक महत्व र स्थान पाउन थाल्छ । र, भयो पनि त्यस्तै । संसदवादी चिन्तन र उपभोक्तावादी संसदीय सुखसुविधाभोगको संस्कृतिजन्य आशा र लालसाप्रति क्रान्तिकारी भनिएकाहरु ग्रसित र आकर्षित भएर यो माओवादी र एमालेबीच एकता भएको हो । स्वाभिमानी आधा दर्जनजति सदस्यबाहेक नेकपा बनिसकेपछि सबै सेट भएबाट पनि पुष्टि हुन आयो ।
डबल नेकपाको विभाजन अन्तर
यो कुराको थप पुष्टि वर्तमानको नेकपाको एकता र विभाजनका बेलामा पनि भएको छ । यसप्रकारको क्रान्तिहीन, सिद्धान्तहीन, नैतिकताहीन र मूल्यमान्यताहीन नितान्त अवसरवादी एकता र विभाजन हुँदापनि अन्धसमर्थन र अन्धविरोध हुनुु विचित्र बिडम्बना छ । आज नेकपाको एकिकरण प्रकृया पूरा नहुँदै पुनः विभाजनमा जाँदा पनि केही अपवादलाई छोडेर सबैका सबै क्रान्तिकारी भनिएकाहरु समेत यो वा त्यो गुटमा सामेल भएर कस्तो र कत्रो गल्ती गरेका छन् ? स्वयंमा स्पष्ट छ ।
क्रान्तिकारीहरु नै संसदीय गोलचक्करमा फसेर केहिले औपचारिक रुपले नै जबरजस्ती मध्यावधी निर्वाचन थोपर्ने भन्ने र केहीले संसद पुनस्र्थापना गर्ने भनेर पुरानो र असफल सिद्ध भैसकेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न मरिहत्ते गर्नु र आफूहरुलाई अझैपनि एक नम्बर कै क्रान्तिकारी भनी आत्मरती गर्नु केकस्तो हाँस्यास्पद कमजोरी हो । जुन स्वयंमा छर्लङ्ग छ ।
क्रान्तिकारी भनेर चिनिएका र मानिएका नेताहरु स्वयं संसदवादको भासमा डुबेर यस्ता भेडा र हनुमानदास होलान् र क्रान्तिलाई पूरै तिलाञ्जली दिँदै उफ्रिएलान् भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्नुसमेत सच्चा क्रान्तिकारी भन्नेहरुको पनि त गम्भीर कमजोरी नै हो । अझ आज माघको दोस्रो हप्तासम्मको आइपुग्दा यी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनिनेहरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु जोगाउने बहानामा आफ्नो खाइपाई आएको संसदवादी पदप्रतिष्ठा र हैसियत जोगाउन टुप्पिदेखिको बल लगाइरहेका छन् । संसदवाद, संविधानवाद, पद्धतिवाद र लोकतन्त्रवाद जस्ता उही गन्हाएको संसद, संसदीय व्यवस्था र संसदीय मूल्यमान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा ज्यान छाडेर लागेका छन् । इमान्दार क्रान्तिकारीले यो संसदीय भ्रम, भ्रष्टता, भास र भाँडभैलोलाई समयमै चिन्न र चिर्न नसक्नु स्वयंमा ठूलै कमजोरी हो जो ज्यादै दुःखद बिडम्बना पनि हो ।
यहाँसम्म आइपुग्दा मूलधाराको भनिएको सत्ताधारी कम्युनिस्ट नामको शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिका साथै सदन, सरकार र सत्ताबाहिर रहेका माओवादी स्कूलकै अन्य क्रान्तिकारी धाराका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवैथरी क्रान्तिकारीहरुको मौनता, अन्यौंलता र ढुलमुलपना पनि सानो कमजोरी होइन । संसदवादी अवसरवादीहरु बिचमा टुटफुट र निषेधको हदसम्म अन्तर्विरोध र अन्तरसंघर्ष चर्किरहेको यो बेलामा वैकल्पिक क्रान्तिकारी बाटो देखाएर छरिएर रहेका र निस्कृय हुँदै गरेका क्रान्तिकारीहरुलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा रहस्यमय ढङ्गले चुप लाग्नु पनि कम कमजोरी होइन । हो, क्रान्तिकारीको शक्ति र संगठनात्मक स्थिति कमजोर छ । र, उनीहरुमाथि घेराबन्दी र नाकाबन्दी पनि छ । अनि दमन र धरपकड पनि छ । तथापि ती सबै प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने पहल र प्रर्यत्न पनि नदेखिनु वा जो देखिएको आशाका त्यान्द्रारुपी २३ दलीय कार्यगत एकता र बन्दैगरेको ४ दलीय रणनीतिक संयुक्त मोर्चा पनि हाल कार्यान्वयनमा लैजाने पहल र हिम्मत नगरेर आफुँ मात्र होइन् अरुलाई पनि केही गर्न नदिने गरी अनिर्णयको बन्दी बन्ने र बनाउनेजस्तो घातक काम हुँदै गरेको छ । जुन हदैसम्मको दुःखद आश्चर्यजनक कुरा हो ।
घटनाबाट के शिक्षा लिने ?
क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको लागि क्रान्तिकारी विचार, सिद्धान्तको अध्ययन र अबलम्बनको महत्व छ । पार्टी एकता वा विभाजनका बेलामा पर्याप्त सैद्धान्तिक–राजनीतिक बहस गरी मूलभूत विषयमा सापेक्षित सहमती भएर मात्र सत्ता वा संघर्षमा सहकार्य हुनुपर्छ । नत्र हतार र हचुवामा हठात् र बलात् एकता वा फूट दुवै प्रत्युत्पादक वा निरर्थक हुन्छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनमा पार्टी र मुख्य नेताहरुको क्रान्तिकारी विचारअनुसारको क्रान्तिकारी आचार–व्यवहार अनिवार्य छ । र, यसलाई कसि बनाएर तिनको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेतृत्वको विचार र आचारमध्ये कुनै एकमा थोरैपनि विचलन आयो भने प्रतिक्रान्ति त्यहीँबाट सुरु हुने चरम खतरा हुन्छ । तसर्थ समयमै सतर्क भै दोस्रो र तेस्रो तहका नेतृत्वपंक्तिले र यहाँसम्म कि कार्यकर्ता र जनताले पनि आवश्यकताअनुसार नेताहरुलाई साथ–सहयोगका साथै आलोचनात्मक चेतसहित प्रश्न र शंका गर्दै सुझाब र दबाब दिनुपर्छ । साथै नेतृत्वलाई खबरदारी, हस्तक्षेप र निषेधसम्म पनि गर्नु नितान्त जरुरी हुन्छ । अन्यथा प्रतिक्रान्ति निश्चित रहन्छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि पार्टीभित्रै अवसरवादी र दक्षिणपन्थीहरु जन्मनसक्ने र हाबी हुनसक्ने अनि तिनले पार्टी र क्रान्तिलाई धरासायी बनाउने खतरा मूलतः पार्टीभित्रैबाट हुने गर्छ । तसर्थ पार्टीभित्रैका क्रान्तिकारी नेतृत्वपंक्तिले कमभन्दा कम कमजोरी गर्ने र भएका गल्ती र कमजोरीलाई नदोहोराउने गरी शुद्धिकृत रु रुपान्तरीत हुनुपर्छ । पार्टीभित्रै निरन्तर लड्ने र क्रान्तिको लागि सदा सचेत, साहसी, सक्रिय, समर्पित र संघर्षशील इमान्दार क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई मात्र उत्तराधिकारी सोंच्नु वा बनाउनु पर्दो रहेछ । अन्यथा तिनै उत्तराधिकारीहरु स्वार्थी र अवसरवादी परे भने पार्टी र क्रान्तिको बिसर्जन तिनैले गर्दा रहेछन् ।
नेतृत्वमा सिर्जनशीलता र गतिशीलताका नाममा हुनसक्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचलन र स्खलन सबै होशियार हुनुु अत्यावश्यक रहन्छ । कहिलेकाँही यान्त्रिकता र जडताका कारण पनि पार्टी र क्रान्तिको बन्ध्याकरण हुने सम्भावना रहन्छ । आवेग र प्रतिशोधको राजनीतिले तत्काल नतिजा त देला तर, दीर्घकालीन उपलब्धि गुम्ने खतराप्रति परम सचेत हुनुपर्दछ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वपंक्ती दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका कामहरुमा भूमिगत रुपले र अन्य नेताहरु तात्कालिक कार्यनीतिक महत्वका कामहरुमा खुला रुपले केन्दृत हुनुपर्दछ । यसरी भूमिगत र खुला, वैधानिक र अवैधानिक, शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संगठन र संघर्षको समायोजन हुनुपर्छ । दीर्घकालसम्म संसदको उपयोग गर्ने कुरा क्रान्तिकारी हुनसक्दैन । त्यो भ्रान्तिकारी मात्रै हुन्छ । र, यसले अन्ततः पार्टी र क्रान्तिलाई संसदवादी भासमा लगेर डुबाउँछ । आवश्यक त्याग, तपस्या, साहस र समर्पण बिना क्रान्ति सम्भव हुँदैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आस्था, निष्ठा, नीति र नैतिकताको महत्व सधैं रहन्छ ।
एकता र विभाजनको मुख्य आधार भावनालाई भन्दा विचारलाई, नेतालाई भन्दा नीतिलाई, शक्तिलाई भन्दा क्रान्तिलाई, पद प्रतिष्ठा भन्दा लक्ष्य रउद्देश्यलाई बनाउनुपर्दछ । यस्तो बनेको खण्डमा हतारो र चटारो गर्ने, हठ र बल प्रयोग गर्ने समूह रहने स्थिति रहँदैन् । साम्राज्यवादी युगमा कम्युनिस्ट पार्टीमा दक्षिणपन्थी विचलनको बिगबिगी हुनेहुँदा यसप्रति गम्भीर र सावधान हुन जरुरी हुन्छ । सच्चा क्रान्तिकारीहरुले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसँगै क्रान्तिकारी संश्लेषण गर्नु र सोअनुसार अघि बढ्नुपर्दछ ।
माओले भनेझैं विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा सहि वा गलत हुनुले सबै कुराको निधो गर्दछ । साथै, पार्टीभित्र माक्र्सवाद लागू नगरी, खुला र स्पष्ट नभई अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन् । माओले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन जालझेल र षड्यन्त्रको अन्त्य हुनुको विकल्प नभएको स्पष्ट बताएका छन् ।